ေရေၾကာင္း လူငယ္အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းတို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းမွ ပင္လယ္ဝႏွင့္ သန္လ်င္တပ္နယ္တို႔သို႔ ေလ့လာေရး သြားေရာက္ | cincds
ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ သန္လ်င္တပ္နယ္ရွိ ေရတပ္သေဘၤာက်င္း ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လြန္းတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ား၏ ျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ Shiplift System ျဖင့္ ေရယာဥ္မ်ား လြန္းတင္/လြန္းခ် စနစ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားရွိ တြင္ခုံ၊ ေဖာက္ခုံ၊ ေရေဘာ္ခုံမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းျပသၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ သန္လ်င္တပ္နယ္၊ တပ္နယ္ခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္၏ ေလ့က်င့္ေရး တာဝန္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ေရေၾကာင္းျပခန္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ) ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္၊ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးခန္းမ၊ နကၡတ္တာရာျပခန္း၊ DMO ရွိ Ship Handling Simulator (A)ႏွင့္ Engine Room Simulator ၊ ဥတၱရေဆာင္ရွိ စာသင္ခန္းမ်ား၊ RAS &Towing Training? Mechanical and Electrical Trainer? Welding Simulator? Damage Control Simulator-Zamani ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ စစ္ေရယာဥ္ (ေမယု)တို႔သို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ရေကြောင်း လူငယ်အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းတို့မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှ ပင်လယ်ဝနှင့် သန်လျင်တပ်နယ်တို့သို့ လေ့လာရေး သွားရောက်
ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်များနှင့် ဗျူဟာ စစ်ရေယာဉ်စုများမှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည့် ရေကြောင်းလူငယ် အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၉) စခန်းပေါင်းစုံမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၆၂ဝ ဦးတို့သည် သင်တန်းနည်းပြများ၊ သင်တန်းအုပ်ချုပ်သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှ ပင်လယ်ဝသို့ တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်များဖြင့် လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ကြသည်။
လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် စစ်ရေယာဉ်များရှိ ရေယာဉ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ လက်နက်နှင့် လက်နက်စနစ်များ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၊ ရေကြောင်း သွားလာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဗဟုသုတများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ဆိုင်ရာ စနစ်များ၊ ရေယာဉ် ခုတ်မောင်းနေစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အခြားသိသင့် သိထိုက်သည်များကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာခဲ့ကြပြီး တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သန်လျင်တပ်နယ်ရှိ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိကြပြီး သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ လွန်းတင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသော ရေယာဉ်များ၏ ပြုပြင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ Shiplift System ဖြင့် ရေယာဉ်များ လွန်းတင်/လွန်းချ စနစ်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ တွင်ခုံ၊ ဖောက်ခုံ၊ ရေဘော်ခုံများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြသကြသည်။ ထို့နောက် ညနေပိုင်းတွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သန်လျင်တပ်နယ်၊ တပ်နယ်ခန်းမသို့ ရောက်ရှိကြရာ ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်၏ လေ့ကျင့်ရေး တာဝန်များကို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်ရှိ ရေကြောင်းပြခန်း၊ တပ်မတော်(ရေ) ဗဟိုစာကြည့်တိုက်၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးခန်းမ၊ နက္ခတ်တာရာပြခန်း၊ DMO ရှိ Ship Handling Simulator (A)နှင့် Engine Room Simulator ၊ ဥတ္တရဆောင်ရှိ စာသင်ခန်းများ၊ RAS &Towing Training? Mechanical and Electrical Trainer? Welding Simulator? Damage Control Simulator-Zamani နှင့် သမိုင်းဝင် စစ်ရေယာဉ် (မေယု)တို့သို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။